Onye isi ala Tanzania na -ewepụta usoro nrụpụta njem nlegharị anya sara mbara
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Tanzania » Onye isi ala Tanzania na -ewepụta usoro nrụpụta njem nlegharị anya sara mbara
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Onye isi ala Tanzania
Onye isi ala Tanzania Samia Suluhu Hassan ewepụtala akwụkwọ mmemme njem nlegharị anya nke ga -ekpughere Tanzania n'ihu ahịa ndị njem ụwa, na -ezube ịdọta ọtụtụ ndị njem na itinye ego na mba ahụ.
A ga-edekọ mmemme mmemme "Royal Tour" a ka malitere na ebe dị iche iche na Tanzania.
Na njem ahụ, Onye isi ala ga -esonyere ndị ọbịa n'onwe ya wee sonye ka ịdekọ njem ahụ maka iziga na mgbasa ozi zuru ụwa ọnụ.
Ndekọ ihe nkiri nke a ga -akwalite Tanzania na mba ụwa bidoro na Ọgọst 28, 2021, na Zanzibar ebe Onye isi ala na -eleta ugbu a.
A ga -edekọ akwụkwọ njem nlegharị anya n'okpuru Onye isi oche kọmitii Onye isi ala onye ga -ahazi atụmatụ ịkwalite Tanzania na mba ụwa na onye bụ odeakwụkwọ na -adịgide adịgide na Ministry of Information, Culture, Arts and Sports.
“Onye isi ala ga -egosi ndị ọbịa dị iche iche njem nlegharị anya, itinye ego, nka na ebe nkiri dị na Tanzania,” ka akụkụ nke nkwupụta nke Ọfịs Onye isi ala Tanzania nyere. Ebumnuche Royal Tours bụ ime ka mmekọrịta dị n'etiti Tanzania na mba ndị ọzọ sie ike, na -akpalikwa njem nlegharị anya na imekọ njem n'etiti Tanzania, mba ndị ọzọ, na òtù dị iche iche.
Onye isi ala Samia kwuru na gọọmentị amalitela atụmatụ ike iji gosipụta mba ahụ site na ịkwalite ohere akụ na ụba dị n'ụwa niile. Mgbe ọ nwetasịrị ọkwá dị elu na Tanzania na Machị afọ a, Onye isi ala Samia kwuru na gọọmentị ya na -atụ anya iweli ọnụ ọgụgụ ndị njem site na nde 1.5 ugbu a ruo nde mmadụ ise n'ime afọ ise na -abịanụ.
N'otu ahịrị ahụ, gọọmentị na -atụ anya iweta ego ndị njem nleta site na ijeri US $ 2.6 ugbu a ruo ijeri US $ 6 n'otu oge ahụ, o kwuru. Iji mezuo ebumnuche ya, gọọmentị na -adọta ugbu a itinye ego na nkwari akụ na njem nlegharị anya site na ọtụtụ ebe nleta ndị njem, ọkachasị saịtị akụkọ ihe mere eme na oke osimiri, n'etiti saịtị ndị ọzọ emepebeghị nke ọma iji dọta ndị njem.
Tanzania ga -achọpụtakwa mba ndị mepere emepe iji zụọ ahịa njem nlegharị anya ya site na ndị nnọchi anya mba ofesi na ndị nnọchi anya obodo nwere ire ahịa ngwaahịa safari ya na ọkwa zuru ụwa ọnụ. A ga -atụle ịtụle ụtụ isi amachibidoro na njem nlegharị anya, na -achọ iji belata ndị na -etinye ego na ụtụ isi na ibu ego ha ga enweta.
Ogbako, osimiri, na ngwaahịa ndị njem nlegharị anya, yana ụgbọ mmiri na -ebu ụgbọ mmiri bụ mpaghara nwere ike mmepe na ịzụ ahịa iji nweta ọtụtụ ndị njem na itinye ego njem - ọkachasị ụlọ oriri na ọ hotelsụ, ụ, ụgbọ elu na akụrụngwa.
Mmepe nke ogige ntụrụndụ ọhụrụ na mba ọdịda anyanwụ A na -atụ anya na Tanzania ga -akwalite njem nlegharị anya na mpaghara Great Lakes, ama maka chimpanzees na gorilla na -agagharị n'etiti Tanzania, Uganda, Rwanda, na DR Congo. A na-atụkwa anya ogige ọhụrụ ga-akwalite njem nlegharị anya mpaghara na n'ime Africa n'etiti Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na Democratic Congo (DRC).
Njem nlegharị anya so na mpaghara akụ na ụba dị mkpa nke mba Africa na -achọ ịzụlite, na -ere ahịa ma na -akwalite maka ọganihu kọntinent ahụ.
Onye isi ala Samia mere nleta ụbọchị abụọ na Kenya na Mee afọ a, wee soro onye isi ala Kenya Mr. Uhuru Kenyatta nwee mkparịta ụka, na-ezube mmepe azụmahịa na mmegharị ndị mmadụ n'etiti steeti abụọ gbara agbata obi. Ndị isi obodo abụọ ahụ ejikọla aka ọnụ iji kpochapụ ihe mgbochi na -egbochi ire ahịa na ndị mmadụ n'etiti mba abụọ dị n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ Africa wee gbaa ndị njem mpaghara na mba ụwa ume ka ha gaa na obodo ọ bụla.
Ha mechara nye ndị isi ha iwu ka ha bido ma mechie mkparịta ụka azụmaahịa iji dozie nnukwu ọdịiche dị n'etiti mba abụọ a. Mmegharị nke ndị mmadụ gụnyere ndị njem mpaghara, mpaghara na ndị mba ọzọ na -eleta Kenya, Tanzania na mpaghara East Africa niile.